नया चलचित्रका लागि २० लाख पारिश्रमिक लिईन पुजाले ?? - Experience Best News from Nepal
१दुखद कोपा हार पश्चात, भ्यान डाइक बालोन डी’ओर २०१९ का प्रमुख दावेदार !!
२कुनै मोडलभन्दा कम छैनन् तेरिया मगर (हेर्नुहोस ५ तस्वीरहरु)
३भारतीय कांग्रेस पार्टीकी महासचिव प्रियंका गान्धी पक्राउ !
४६ मिलियनमा रोमा नगए हिगोइनको पारिश्रमिक घटेर युभेन्ट्समा मात्र ४ मिलियन हुने
५हिट फिल्म कबिर सिंह पश्चात ३ करोड पारिश्रमिक लिने साहिदको कति पुग्यो पारिश्रमिक ??
६जीम पश्चात यस्तो देखिईन केकी, हेरौ केकीको जीम गर्दाको ६ तस्बिरमा !!
७गर्भवती बनाए ५ सय यूरो पारिश्रमिक दिने यी युवतीको घोषणा !!
८सरकारले सार्वजनिक गर्‍यो चन्द समूहले पूरा गर्नुपर्ने कामको सूची
नया चलचित्रका लागि २० लाख पारिश्रमिक लिईन पुजाले ??
प्रकाशित मिति : सोमवार, बैशाख २, २०७६
चलचित्र ‘तिमी सँग’का निर्देशक शिशिर राणाको लेखन तथा निर्देशनमा तयार हुन लागेको नयाँ चलचित्र ‘पोई पर्यो काले’मा नायक आकाश श्रेष्ठ र नायिका पूजा शर्मा फाइनल भएका छन् । उनीहरुले आज एकसाथ चलचित्रमा संझौता गरेका छन् । चलचित्रको छायांकन जेठबाट सुरु हुनेछ । चलचित्रको बिषयमा बोल्दै निर्देशक राणाले भने–‘यो चलचित्र रुप भन्दा पनि मन राम्रो हुनुपर्छ भन्ने कथालाई प्रस्तुत गर्छ ।’
चलचित्र ‘पोई पर्यो काले’का लागि नायिका पूजा शर्माले महंगो पारिश्रमिक लिएकी छिन् । उनले यो चलचित्रका लागि २० लाख पारिश्रमिक लिएकी हुन् । पारिश्रमिकको बिषयमा उनले भनिन्–‘पारिश्रमिक ठूलो कुरा होइन पनि हो पनि । मुख्यकुरा, म चलचित्रका लागि शतप्रतिशत मिहिनेत दिनेछु । चलचित्रको कथा निकै मन परेपछि मैले काम गर्ने निर्णय गरेको हुँ ।’
योसँगै पूजा नेपाली चलचित्रको सबैभन्दा महंगी नायिका बनेकी छिन् । यसअघि उनले चलचित्र ‘सम्हालिन्छ कहिले मन’का लागि १५ लाख पारिश्रमिक लिएकी थिइन् । यस्तै, चलचित्रका लागि नायक आकाश श्रेष्ठले पनि महंगो पारिश्रमिक लिएका छन् । उनले चलचित्रका लागि १८ लाख पारिश्रमिक लिएका छन् । चलचित्रमा आकाश र पूजाको जोडीलाई हेर्न सकिनेछ । योसँगै आकाश र पूजाले एकसाथ तेश्रो चलचित्रमा काम गर्ने पक्का भएको छ । चलचित्रमा अर्का एक नायक र नायिका पनि हुने बताइएको छ । चलचित्रलाई कात्तिकको ८ गते लक्ष्मीपूजाको अवसर पारेर रिलिज गरिनेछ ।
रेड बर्ड प्रोडक्शनको ब्यानरमा निर्माण हुन लागेको चलचित्रका प्रस्तुतकर्ता श्यामबहादुर थापा हुन् । रघु परियार र किरण नेपाली कार्यकारी निर्माता रहेको चलचित्रका निर्माता दिपक मनाङ्गे हुन् । चलचित्रका हेड अफ प्रोडक्शन सुरज आचार्य रहेका छन् । चलचित्रमा पुरुषोत्तम न्यौपाने र शीव गौतमको संगीत रहनेछ ।
पूजाको श्रीमान बन्दै सौगात !!!
हिरोको भन्दा बढी पारिश्रमिक लिदै पुजा !! नेपालकी सर्वाधिक महंगी नायिका
सलमान- कट्रिनाको विवाहको दृष्य भाइरल
न्युयोर्कमा मस्त रहेका मलाइका र अर्जुन !! सामाजिक संजालमा न्यूयोर्कमा घटेको घटनाले चर्चामा !!
चलचित्र रिलिज हुदै छ तर रिलिज अगाबै बेरोजगार बने साहिद !!
नायिका निशा र मोडल पार्वती राईको बिकिनी अवतारले फेरी ततायो सामाजिक सञ्जाल !! (तस्बिरहरुमा)
३३ लागिन् नम्रता !! ब्वाइफ्रेन्डविनै मनाइन् जन्मदिन
मौनीको नखराले फिल्म क्षेत्रमा फ्लप साबित !!
दुखद कोपा हार पश्चात, भ्यान डाइक बालोन डी’ओर २०१९ का प्रमुख दावेदार !!
दशक लामो रोनाल्डो मेस्सीले जमाएका व्यक्तिगत पुरस्कार बालोन
विश्व विशिष्ट क्लब बार्सिलोना डी लिग्ट नजानुको प्रमुख ४ कारण बाहिरियो !!
डी लिग्ट युभेन्ट्समा सार्वजनिक हुने मिति समेत तय
युनाइटेडबाट यी खेलाडी ल्याउन रोनाल्डोले गरे युभेन्ट्सलाई प्रस्ताव !!
युभेन्ट्स स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डोले पुन म्यानचेस्टर युनाइटेडका स्ट्राइकरलाई
मेस्सीसंगै रेड कार्ड पाएका ग्यारी मेडेलले दिए प्रतिक्रिया !! के भन्छन त् मेडेल
अर्जेन्टिनी लिओनेल मेस्सी जस्तै चिलीका ग्यारी मेडेलले समेत
पी एस जीले गर्यो नेय्मारलाई रियल मड्रिडका निम्ति प्रस्ताव !! के भन्छ मड्रिड
क्याम नाउमा फर्किन समर्थकले सकरात्मक अभिव्यक्ति पेश गरिरहेका
भव्यताका साथ् बार्सिलोनाले आज डी जोंगलाई स्वागत गर्दै !! पत्रिकाको फ्रन्ट पेज देखि भित्ता भित्तामा नारा !!
आयक्सका चर्चित डच फुटबलर फ्रांकी डी जोंगलाई आज
हार पश्चात मेस्सीले गरे भी ए आर प्रति कडा आलोचना !!
कोपा अमेरिका ट्रफीबाट लिओनेल मेस्सी टिम अर्जेन्टिना सेमी
ब्राजिललाई अझै मेस्सी कै डर : सिल्भा
अर्जेन्टिना स्टार लिओनेल मेस्सी कोपा अमेरिकामा निकै जम्न
भोलि (१० गते) नेपाल बन्दको घोषणा (हेर्नुहोस् विज्ञप्ति)
नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)
कोपा अमेरिकाको दबदबा, ब्राजिलले गर्यो अन्तिम ८ को यात्रा तय !!
कोपा अमेरिका फुटबलको आयोजक राष्ट्र ब्राजिल क्वाटरफाइनलमा
जेस्ट मिडिया द्वारा संचालित जेस्टखबर डटकम